Semalt: Fomba folo hampitomboana ny fanatrehana an-tserasera
Ny iray amin'ireo fomba hiantohana ny fahombiazan'ny fandraharahana dia ny fananana aty amin'ny aterineto satria maherin'ny 85% amin'ny fikarakarana vokatra sy serivisy no mitranga amin'ny aterineto. Ivan Konovalov, Semalt Mpitantana Success Successor, dia manolotra anao ity lisitra manaraka ity hahitana fahombiazana amin'ny aterineto.
Voalohany, azavao ny tanjona kinendry ho an'ny fanentanana nataonao. Midika izany fa tsy maintsy mametraka ny toetra maha-olona amin'ny toetr'andro marika nomerika na tanjona. Hanampy amin'ny fampivondronana ny endrika samihafa amin'ny fampiasana toetra toy izany, toy ny motivateur, tebiteby, faniriana, toetra, tanjona, na fahazarana. Manangana lanjan'ny tsena izy ireo, ka mahatonga mora kokoa amin'ny varotra dizitaly, mora kokoa, ary mahomby kokoa.
2. Fivarotan-tsakafo mpanjifa.
Ny sarintany fanodidinan'ny mpanjifa dia ampiasain'ireo mpivarotra mba hanampy azy ireo hahatakatra ny orinasa amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa sy ny fifandraisana misy eo amin'ny orinasa. Amin'ny fomba toy izany dia mora ny mamantatra ny zavatra ilain'ny mpanjifa mandritra ny fifampiraharahana rehetra, ny fomba hanatsarana azy ireo, ary raha ilaina ny manatsara ny famerenana amin'ny serivisy.
3. Votoatiny stratejika
Ilaina ny hahatonga ny votoatin'ny vohikala hiditra am-pilaminana sy hivoaka amin'ny fotoana mety mba hisarihana ny mpanjifa. Ny mpividy dia tsy tokony hamoaka dokambarotra momba ny fividianana vokatra izay mety tsy fantany. Voalohany, manome azy ireo fanazavana sasantsasany momba ny vokatrao na ny serivisinao ary mampiasa kalandrie iray mba hizaràna votoaty maharitra.
4. Fandraisana Content
Te-hientanentana ny mpividy, ary izany no antony hitsidihany ny tranokalanao. Raha mitovy ny votoaty isaky ny mitsidika azy ireo, dia ho liana amin'ny fitsidihana izay miteraka fihenan'ny fifamoivoizana izay tsy tsara. Ny fanavaozan'ny votoaty dia miankina amin'ny filàna sy ny tanjon'ireo mpihaino anao. Na izany aza, isaky ny enina hatramin'ny roa ambin'ny folo volana, dia makà antoka ny fanavaozana ny tranokala amin'ny tranokala mba ahafahana mitazona ny fironana ankehitriny.
Ny traikefan'ny mpampiasa indrindra dia mifantoka amin'ny fomba fifandraisana amin'ny olona miaraka amin'ny vokatra nomerika. Ny tompona orinasa iray dia mety manana tranonkala tsara tarehy kanefa tsy mahafantatra ny fomba ampiasaina azy. Ny fahaiza-manaony dia mametraka fampahalalana momba ireo pejy be mpijery indrindra, sy ny fomba hivezivezan'ny mpiserasera amin'ny tranokala.
Zava-dehibe ny fandraisan'anjaran'ireo toeram-piompiana karazana satria maherin'ny 80% amin'ny mpividy maoderina no mampiasa motera mitady ny vokatrao. SEO (Search Engine Optimization) dia manampy ny mpanjifa mivantana amin'ny orinasa eo anivon'ny orinasa. Azo ampiasaina ny teknikan'ny pay-per-click (PPC), fa ny valin'ny fikarohana biolojika avy amin'ny SEO dia 8.5 isaky ny mahomby.
Ny fampidirana ny media sosialy amin'ny marketing ara-nomerika dia afaka manana tombony manan-danja toy ny fanekena ny mari-pamantarana, ny tsy fivadihana, ny fiovam-po ary ny fanatsarana ny fahitana ny mpanjifa. Na izany aza, aza mamorona kaonty tranainy fotsiny. Ataovy azo antoka fa fohy ny lahatsoratra mba ahafahan'izy ireo mizara bebe kokoa, ary manana teny fanalahidy hampitomboana ny fahitana azy ireo. Ampiasao ireo sary avo lenta mba hampisehoana ny marika ary hitsinjo matetika ireo olona vaovao hijery ireo izay mamaly ny ankamaroan'ny mpanjifa. Ny votoatin'ny finday sy ny horonan-tsary dia mampahafantatra sy mora takarina ihany koa. Plus, mahafinaritra tokoa ny fizarana.
8. Miresaha amin'ny mpihaino
Maro ny olona manatona sehatra sosialy ho an'ny serivisy mpanjifa. Ny ankamaroan 'ireo dia ilaina ary ny fanontaniana dia tsy raharahiana. Manaova teboka hamaliana ireo fanamarihan'ny mpanjifa sy ny feedback ary avelao izy ireo hahafantatra fa mihaino ianao. Noho izany, ny hafa dia te hizara ny traikefany amin'ny vokatra na ny tolotra atolotra. Misaotra ireo rehetra izay mizara lahatsoratra iray ao amin'ny tranokala na ireo izay maneho hevitra amin'ny lahatsoratra hanohizana ny resadresaka.
9. Ny dokam-barotra sosialy
Ny fampielezan-kevitra amin'ny fahombiazan'ny haino aman-jery dia tokony hanana tanjona, hampiasa ny hafatra sosialy amin'ny beta-hizaha ny dokam-barotra sosialy, ary ahazoana antoka fa hamadika ny dokam-barotra isaky ny telo hatramin'ny dimy andro, ary hahazoana antoka fa azo ampiasaina amin'ny finday izany.
Mihoatra ny 65% ​​amin'ny fampiasana media dizitaly no mitranga amin'ny fitaovana finday. Ilaina ny maka io tsena io mba hampitombo ny vidin'ny tranokala. Ataovy azo antoka fa ny tranokalanao dia manana endrika manintona izay tsara indrindra ho an'ny famolahana sary Source .